Ii-FAQ - gomymobi.com
109 Iilwimi ziyaxhaswa
Sizama ukukunceda ukuqonda izisombululo zethu ngokukhawuleza
Nangona sikholelwa ukuba kufanelekile kuvavanyo olulungileyo ekusebenziseni ezona zisombululo zigqibeleleyo, kodwa ngamanye amaxesha ukuba awukwazi ukuqonda nantoni na, nceda ufumanise imibuzo ebuzwa rhoqo apha ngezantsi; kwaye khumbula sihlala silapha ukukunceda.
Imibuzo ebuzwa qho?
Imibuzo yakho iphendulwe apha
Ngaba ndinokufumana umda womda ongenamda kwiiwebhusayithi zam?
Ngokuqinisekileyo! Siqinisekisa lo mbandela.
Ndingayisebenzisa i-SSL kunye nedomeyini yesiko?
Hayi! Okwangoku asiyixhasi i-SSL kodwa siza kuyenza kungekudala.
Ewe! Thenga nje isiqinisekiso sakho se-SSL uze usisebenzisele indawo yakho yesiko.
Ndingaba namaphepha angenamda kwiwebhusayithi?
Ewe! Iqonga lethu lenzelwe ukukuvumela ukuba wenze amaphepha ewebhu angenasiphelo, yenza kuphela ngendlela othanda ngayo.
Ndingazongeza izinto ezintsha kumaphepha ewebhu?
Uxolo kodwa HAYI! Injongo yethu yeqonga kukunceda abantu ukuba benze iwebhusayithi yeshishini ngokukhawuleza kunye nemixholo eyintandokazi eyakhelwe-ngaphakathi kwiwebhusayithi, bafuna kuphela ukukhetha enye yemixholo emva koko baqale ukwakha iwebhusayithi yoyilo; Abazukufuna ukucinga ngendlela yokulungisa izinto zokwenza amaphepha abe mahle, kukungangxami ukuba abanalo ixesha elininzi.
Ewe! Ngoku unokwenza iwebhusayithi ukusuka ekuqaleni kunye noMakhi wethu onamandla we-Element.
Ngaba ndingazikhuphela iiwebhusayithi ezenziwe ngokupheleleyo?
Ewe! Ngaphandle kokupapasha iiwebhusayithi ezenziweyo njengeendawo zakho / imimandla engezantsi, okanye ukulayishwa ngeFTP, siyakuxhasa ukukhuphela iiwebhusayithi ezenziwe ngokupheleleyo.
Ngaba ndinomxholo owahlukileyo wewebhusayithi yam?
Ngokusisiseko, isazisi sethu nguewe! Uya kudinga ukulayisha umxholo wakho owahlukileyo, emva koko usete njengabucala oza kuwusebenzisa kwiiwebhusayithi zakho kuphela.
Ungasitshintsha njani isihloko sePhepha leSiza?
Itayitile yePhepha leSiza inokutshintshelwa kwimenyu yokuseta indawo nganye kwiNdlela yokuHlela.
Uyibeka njani indawo yam yesiqhelo kwindawo eyenziweyo?
Unokwalatha kuphela isiko ledomain kwiNdlela yokuHlela, emva kokungena kwisizinda sakho sesiko, kuya kufuneka ubhalise kwisizinda sobhaliso emva koko wenze irekhodi leCNAME kwaye ukhombe indawo yethu. www.gomymobi.com
Ngaba kunokwenzeka ukongeza ibhlog kwiivenkile nakwiiwebhusayithi?
Hayi, esi sisombululo asizukuphuhliswa kungekudala. Nceda usebenzise inkqubo yokubloga yangaphandle enje ngePhakathi emva koko yongeza ibhlog yekhonkco kwiwebhusayithi yakho okanye kwivenkile.
Ngaphandle kwemimandla, ndingaba newebhusayithi yeshishini okanye ivenkile?
Ewe! Ilula kakhulu, kufuneka usebenzise kuphela imimandla ephantsi kwiiwebhusayithi zakho zeshishini kunye nakwiivenkile. Nje ukuba unemimandla yesiko, kwaye uyabela iiwebhusayithi kunye neevenkile zakho, emva koko yonke into isebenza kakuhle ngaphandle kokonakalisa okanye ilahleko.
Ndingaba nevenkile yasimahla kwi-Intanethi ngonaphakade?
Ngokuqinisekileyo! Sikunika izixhobo kunye nezisombululo zokuthengisa iimveliso zakho zobugcisa kwihlabathi SIMAHLA ebomini. Kodwa ngenxa yokuthintelwa kwezixhobo, unokuba neemveliso ezili-10 ezineeakhawunti zasimahla.
Ngaba ndingathengisa into kwiwebhusayithi yam?
Ewe! Emva kokwenza iwebhusayithi, kufuneka uyivulele ivenkile kuphela emva koko uqalise ukuthengisa nantoni na onayo.
Iimveliso aziboniswanga njengohlobo loku-odola?
Kuya kufuneka ufake isalathiso seemveliso kwiiSetingi zeMveliso kuqala.
Ndilidibanisa njani ithambeka lam ngqo evenkileni?
Ivenkile isebenza njengefolda yommandla wedomeyini, ngenxa yoko akunakwenzeka ukuba uncamathisele isizinda ukuthenga ngokuthe ngqo.
Ndingabutshintsha njani ubungakanani bezinto kwiphepha lokuphuma?
Ungatshintsha kuphela ubungakanani kwiphepha leenqwelo, iphepha lokuphuma kulapho unokubeka khona iiodolo kuphela.
Ndingazilanda njani iiodolo zam ezibekiweyo?
Emva kokubeka iiodolo ngempumelelo, uya kuthunyelwa kwiphepha loku-odola ukuhlawula kunye nokulandela umkhondo weodolo eyenziweyo yakutshanje, uya kufumana eli khonkco kwi-imeyile ethunyelwe kwii-imeyile zakho ezongezayo.
Utshintsha njani / uhlela ikhonkco levidiyo kwimixholo yesiza?
Izinto ezizodwa ezingenako ukutshintsha ngabahleli okanye ikhowudi yemithombo, kuya kufuneka wenze umhlaba kumxholo wokusetwa.php yomxholo wesiza emva koko usebenzise i-PHP ukwenza amaxabiso atshintshiweyo.
Yazisa ukuba ndifuna ukuphucula isicwangciso sam?
Uxolo ngale nto, kodwa ezinye izinto kunye nezisombululo zezamalungu ahlawulwayo, nceda uhlaziye isicwangciso sakho sokusebenzisa ezi zixhobo. Izicwangciso zethu zitshiphu kakhulu, qhagamshelana nathi nje ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu.
Ukuba usebenzisa iakhawunti yedemo, uninzi lweempawu ezibalulekileyo zikhubazekile, nceda uzame ngeakhawunti yokwenyani, SIMAHLA ukubhalisa.
Lo myalezo ubonakala ukwazisa ukuba iakhawunti yakho iphelelwe lixesha, nceda uvuselele ukuze uqhubeke nokuyisebenzisa.
Lo myalezo ubonakala ulumkisa ukuba awungekhe uthothulele iakhawunti yakho kwizicwangciso ezisezantsi, kuba iqonga alinakuthatha isigqibo sokuba zeziphi iisayithi / iivenkile oza kuzicima. Ke unokuhlaziya kuphela isicwangciso sakho sangoku okanye unyusele kwizicwangciso eziphezulu.
Ngaba ndingazenza izicwangciso ezahlukileyo zesiza kunye nokugcina?
Uxolo ngale nto, kodwa akukho sicwangciso sahlukileyo sendawo okanye ivenkile, cwangcisa kuphela ngokudibanisa indawo kunye nevenkile exhaswa, unokuvula okanye ucime izisombululo zevenkile kwaye usete isithintelo sesiza kunye nezixhobo zokugcina.
Silapha ukukunceda ukuba wakhe iiwebhusayithi zakho zeshishini ngokukhawuleza, ngokulula nangobuchule; ikwabonelela ngesona sisombululo sigqibeleleyo sokuthengisa iimveliso zakho zobugcisa kwihlabathi ngekhomishini simahla, ufumana yonke inzuzo.
Bhrawuza imixholo yewebhusayithi
Sisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeicookies ukwenza amava akho kwiwebhusayithi yethu. Sisebenzisa ii-cookies ukuphucula amava omsebenzisi, kunye nokuhlalutya ukugcwala kwewebhusayithi. Ngezi zizathu, sinokwabelana ngedatha yokusebenzisa indawo yakho namaqabane ethu ohlalutyo. Ungavuma ukusetyenziswa kwezi teknoloji ngokuvala esi saziso, ngokusebenzisana nayo nayiphi ikhonkco okanye iqhosha elingaphandle kwesi saziso okanye ngokuqhubeka ukhangela enye into.